Manusya Hunuko Kala - Osho | Shop Ratna Online
Home / Books / Nepali Books / Philosophy / Manusya Hunuko Kala – Osho
Manusya Hunuko Kala – Osho
Manusya Hunuko Kala - Osho quantity
SKU: Manusya Hunuko Kala (RBD) Categories: Books, Nepali Books / Philosophy Tag: Philosophy-Nepali
Osho Sahitya Sadan
यसै पुस्तक भित्रबाट…. मन एउटा भ्रम हो- जुन छदैछैन, तर हामीलाई छ भन्ने लाग्छ । र, मनले आफू भएको यति धेरै अनुभव गराउँछ कि हामी स्वयम् नै मन हुँ भन्ने सोच्न थाल्छौँ मन एउटा माया हो, ठीक सपनाजस्तै । यो साबुनको फिजजस्तै हो, जसको भित्र केही पनि छैन तर त्यो नदी माथि तैरिरहेको साबुनको फिंजजस्तो देखिन्छ । उदाउँदो सूर्यको किरण त्यसमा पर्यो भने उक्त फिंजको डल्लोमा इन्द्रधनुष देखिन्छ तर त्यस मित्र केही पनि हुँदैन ।
म तिमीभित्र भएको परमात्माको त्यो ज्योति देख्न सक्छ, जुन ठीक मनको एउटा कुनामा छ । एकपटक मात्र तिमीलाई त्यसको झल्को मिल्यो भने फेरि त्यो ज्योति तिनै बन्नेछ । म तिमीलाई कयौँ तरिकाबाट त्यसतर्फ धक्का दिन्छु जसबाट त्यसको झल्को मिलोस् । यदि तिमी त्यसबाट चुक्यौ भने तिमी नै त्यसको जिम्मेवार हुने छौ , कोही अरु होइन ।
त्यहाँ कुनै नर्क नै छैन, र हुन पनि सक्दैन । परमात्मा यति धेरै समृद्ध छन्, उनको करुणाले सबै ठाउँ स्वर्ग हो । उनकै अतिरेकबाट बगिरहेको करुणाको प्रसाद होस्वर्ग। त्यहाँ नर्क हुनैसक्दैन । नर्क त यिनै साधु-सन्यासीहरुले निर्मित गरेको हुन्, जो पापीहरू स्वर्गमा भएको कल्पनासमेत गर्न सक्दैनन् । मानिसहरूलाई विभाजित गरेर आफू विशिष्ट स्थान प्राप्त गर्नका लागि कथित नर्क सिर्जना गरेका हुन् ।
यदि तिमी विनम्र छ भनेर भन्छौ भने तिमी विनम्र छैनौ । कसले दावी गरिरहेको छ विनम्रताको ? विनम्र हुने दावी गर्न सकिँदैन । यदि तिमी साँच्चै विनम्र छौ भने त्यसलाई व्यक्त गर्न सक्दैनौ । तिमी त्यसलाई भन्न मात्र सक्ने होइन अनुभव पनि गर्न सक्दैनौ, किनकि यसको अनुभव हुनुले नै फेरि अहंकार जन्माउँछ ।
हरेक व्यक्ति कायर हो । जसलाई तिमी बहादुर भन्छौ, त्यो तिनीहरूको मखुण्डो मात्र हो । गहिराइमा तिनीहरू पनि अरूजस्तै कायर हुन् र वस्तुत: अझै बढी कायर हुन् । बस्, आफ्नो कायरता लुकाउनको लागि तिनीहरूले आफ्ना चारैतर्फ बहादुरीको घेरा बनाएका हुन् । प्रायः तिनीहरू यसरी काम गर्छन् जसले गर्दा अरूले आफूलाई कायर नभनून् ।
Vedma ke Chaina? (Om Tat Sat) – Bhola Thapa
NPR395.00 Add to cart
Yo Kholako Sanglo Pani – Krishanprasad parajuli
NPR275.00 Add to cart
Vedantaparibhashasar – Saratkumar Bhattarai
Shukraniti – Damarubalbha Paudyal